Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Dubai - Phnom Penh: Sidina farany natolotry ny Emirates
Vao haingana ny Emirates dia nanitatra ny fisiany tany Azia atsimo atsinanana tamin'ny fanombohana serivisy vaovao mifandraika isan'andro avy any Dubai ka hatrany Phnom Penh (PHN) any Kambôdza, avy any Yangon any Myanmar. Ity serivisy vaovao ity, miasa amin'ny fiaramanidina Boeing 777, manitatra ny tambajotram-pitaterana an'habakabaka Azia atsimo amin'ny tanàna 13 amin'ny firenena valo ary manome safidy sy fanamorana bebe kokoa ho an'ireo mpandeha mandeha eo anelanelan'ny Phnom Penh mankany Dubai sy ny sisa. Manamarika ny fotoana voalohany ihany koa hatramin'ny 2014 fa nifandray tamin'ny rohy mivantana i Phnom Penh sy Yangon, izay nitombo ny filan'ny fivezivezena amin'ireo tanàna roa mivoatra haingana ireo.
Phnom Penh, ny toerana voalohany mankany Kambôdza notompoin'ny Emirà, dia iray amin'ireo toekarena mitombo haingana indrindra any Azia atsimo atsinanana. Amin'ny maha tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena azy sy ivom-barotra lehibe indrindra, i Phnom Penh dia mandray anjara betsaka amin'ny fitomboan'ny harinkarem-pirenena. Varavarana mankamin'ny kompleksin'ny tempolin'i Angkor Wat malaza eran'izao tontolo izao, manome endrika tsy fahita firy an'i Azia fahiny ny mpitsidika, ary nanatri-maso fitomboan'ny isan'ny mpizahatany vahiny.